Multi-Zvengarava USB-C nomusimboti
Imwe Port Port USB-C HUB
Iyo USB4 tsananguro inorumbidza uye inovaka pane iripo USB 3.2 uye USB 2.0 maratidziro. Iyo USB4 dhizaini inotsanangura nzira yekugovana imwechete-yekumhanyisa chinongedzo neakawanda magumo emidziyo mhando zvine simba izvo zvinonyanya kushandira kuchinjirwa kwezuva netyye uye kunyorera. Sezvo USB Type-C ...
HDMI Ratidza Port
HDMI yakagadzirirwa kutsiva yekare analogo chiratidzo odhiyo uye vhidhiyo kutapurirana maficha senge SCART kana RCA zviteshi. Iyo inotsigira akasiyana TV uye komputa vhidhiyo mafomati, kusanganisira SDTV, HDTV vhidhiyo, uye yakawanda-chiteshi dijitari odhiyo. Ose ari maviri HDMI uye UDI isina odhiyo yekufambisa basa inowana nhaka ...
HDMI iri nani pane VFA, Kana zvirizvo, Ndechipi chikonzero?
VGA yave kusvika makore makumi matatu nemashanu ikozvino uye iri analogue fomati. Kune komputa yemazuvano izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kushandura kubva padhijitari, kune analogue RGB & sync, wobva wadzokera kudigital kuti uratidze pane yako LED / LCD tarisa - pachave nekumwe kurasikirwa kwemhando yemufananidzo padanho rega rega, kusanganisira ...
Chii chinonzi USB 3.2 standard?
Universal Serial Bus, kana USB, yanga iriko kwenguva yakareba uye taishandisa kuumbiridza akasiyana siyana emidziyo kubva pakachengeterwa kusvika pakuisa Hardware. Sezvo nguva inopfuura, zviyero zvinoda kuvandudzwa kuti zvifambirane neazvino Hardware uye ekupedzisira-mushandisi zvinodiwa. Magadzirirwo uye akasiyana ehunyanzvi d ...
chii chinonzi USB3.1 HUB?
ne admin pane 20-06-29
USB-C hub & USB 3.1 hub Tsvaga zvese zvaunoda kuti uzive nezve USB-C hubs uye USB 3.1 hubs pano. Ndeupi musiyano? Pane chero mutsauko here? USB Type-C iri yekubatanidza fomati yakaunzwa muna2015. Iyo Type-A chinongedzo, icho chave chakajairika kwenguva yakareba, chinotsiviwa ...
USB 3.0 hub Iyo USB 3.0 yakajairwa yakaratidzwa muna2008 yakavimbisa zvakanyanya kuwedzera data kubudikidza chiyero ichienzaniswa neye tekinoroji inotungamira USB 2.0. Nekuda kwekuti USB 3.0 inoenderana nematekinoroji apfuura, zvishandiso zvekare zvichiri kugona kushandiswa neiyo USB 3.0 hub. Pfupiso ...
Chii chinonzi HDMI chinounza kwatiri?
HDMI Technology Inosvika mabhiriyoni masere michina inogoneswa neHDMI tekinoroji yakatumirwa kubva pakatanga kuburitswa HDMI muDecember 2002. Iyo ichangoburwa HDMI 2.1 Tsananguro yakaburitswa munaNovember 2017 inoramba ichigonesa kuvandudzwa kwezvitsva zvezvigadzirwa uye ...
chii chinonzi HDMI 2.1 Tsananguro;
HDMI 2.1 Rondedzero HDMI® Tsananguro 2.1 ndiyo ichangoburwa kuvandudzwa kweiyo HDMI tsananguro uye inotsigira hwakawanda hwepamusoro mavhidhiyo resolution uye zororo mareti anosanganisira 8K60 uye 4K120, uye resolution kusvika kusvika 10K. Dynamic HDR mafomati anotsigirwawo, uye kugona kuita bandwidth kunowedzerwa ...
Mashandisiro anoita USB Type-C Connector paHDMI Alt Mode?
Iyo HDMI Alt Mode ye USB Type-C TM chinobatanidza inobvumidza HDMI-inogonesa sosi dhijitari kuti ishandise USB Type-C chinongedzo kuti ibatanidze zvakananga kune HDMI-inogoneswa kuratidzwa, uye kuendesa HDMI mamaki uye maficha pamusoro pete nyore tambo pasina kudikanwa kweprotocol uye yekubatanidza. adapters kana dongles. Izvi zvinogonesa t ...
chii chinonzi USB 3.2?
USB 3.2 Rondedzero Sezvo tekinoroji yekuvandudza inofora ichienda kumberi, mhando nyowani yemidziyo, mafomati enhau, uye chengetedzo hombe isingadhuri iri kusangana. Ivo vanoda zvakanyanyisa bandwidth yekuchengetedza iyo yekudyidzana ruzivo vashandisi vauya kutarisira. Uye zvakare, zvishandiso zvemushandisi zvinoda hi ...
Chinhu che USB Chaja (USB Simba Kuendesa)
USB yakashanduka kubva kune data interface inokwanisa kupa mashoma magetsi kune wekutanga mupi wesimba ine data interface. Nhasi uno michina yakawanda inobhadharisa kana kuwana simba ravo kubva kuzviteshi zve USB zviri mumalaptop, mota, ndege kana zvigadziko zvemadziro USB rave kwese kwese simba socket kune vakawanda s ...
1. USB Type-C® Cable uye Connector Tsananguro iwe yaunoda kuziva
USB Type-C® Cable uye Connector Rondedzero Nekuenderera mberi kubudirira kweiyo USB interface, pane chikonzero chekugadzirisa USB tekinoroji kuti ishandire nyowani komputa mapuratifomu nemidziyo sezvavanenge vachienda kune zvidiki, zvakapfava uye zvakapusa fomu-zvinhu. Mazhinji emapuratifomu matsva uye zvishandiso zviri ...
Vhura: 8:00 AM - Kuvhara: 22:00 PM
Iva wehunyanzvi nekuti wakazvipira, unotisarudza, unosarudza ruzivo rwakasiyana rwebasa.Ikambani yedu inosanganisa mhinduro mupi weR & D, dhizaini, kugadzira uye kushambadzira masevhisi.
HDMI iri nani pane VFA, Kana zvirizvo, Chii ...
Sign up yedu USN Hupenyu tsamba & tora 10% wabvisa vouchert